हिमाल खबरपत्रिका | छरितोको छनोट
काठमाडौंका व्यस्त सडकमा ट्राफिक जाम र साँघुरा सडकबाट सजिलै छिचोल्न निजी कार चढ्नेहरूको छनोट भारतमा निर्मित छरिता गाडी बनेको छ।
काठमाडौंमा सडक छिचोलेर गन्तव्यमा पुग्न हम्मेहम्मे पर्ने भीडभाड छ। मोटरसाइकलहरू त सानातिना चेपबाट पनि छिर्छन्, तर सार्वजनिक यातायात या निजी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनले चाहेर पनि त्यसो गर्न सक्दैनन्। सवारीको यो चापले निजी गाडी चढ्नेहरूको रुचि बदलिरहेको छ। गाडी बिक्रेता कम्पनीहरूका अनुसार, राजधानीमा ठूलो आकारका एसयुभी (स्पोर्ट्स युटिलिटी भेइकल) या सेडान कारको साटो सानो आकारका गाडीको बिक्री बढेको छ। नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सौरभ ज्योति भन्छन्, “विशेषगरी भारतमा बनेका साना कारप्रतिको आकर्षण बढेको छ।”
कार उत्पादनमा नामी जापान र कोरियाका कम्पनीसँगै युरोप र अमेरिकाका प्रायः उत्पादकले भारतमा आफ्नो उद्योग स्थापना गरिसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका भारत निर्मित कार नेपालमा सहजै उपलब्ध छन्। नेपाल र भारतको भौगोलिक बनोट तथा सडक संरचना धेरै हदसम्म मिल्ने भएकाले पनि भारतीय ग्राहक लक्षित साना गाडी नेपालीको रोजाइ बनेका हुन्। त्यसमाथि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको विनिमय दरमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सवारीसाधनको बजार बढ्न सकेको छैन भने नेपाल र भारतको स्थिर विनिमयदरका कारण त्यहाँ उत्पादित गाडीको मूल्य छिटो–छिटो परिवर्तन हुँदैन।
रोजाइमा सानै गाडी
नेपाली ग्राहकहरूको रोजाइले बिक्रेता कम्पनीबीच साना गाडी आयातमा प्रतिस्पर्धा छ। एसयुभी र सेडान कार निर्माणमा विश्वमै ख्याति कमाएका टोयोटा, निसान जस्ता जापानी कम्पनीले पनि साना गाडी बनाउन थालेका छन्। निसान को नेपालस्थित अधिकृत बिक्रेता दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्सका सिनियर म्यानेजर शम्भु सुवेदी अहिलेसम्म जापानबाटै गाडी ल्याइरहेकोमा अब भारतमा निर्मित कार आयात गर्न लागेको बताउँछन्। निसान ले भारतमा माइक्रा ब्रान्डको सानो कार उत्पादन गरेको छ भने टोयोटा ले पनि भारतमा उत्पादित इटिओस कार नेपालमा ल्याउँदैछ।
भारतभन्दा तीन गुणा महँगोमा किनेको कारको आयु न्यूनस्तरको इन्धनका कारण घट्ने भएकाले नेपालका उच्च वर्गका ग्राहक समेत रु.१५ लाखदेखि रु.३० लाखसम्मका छरिता कारप्रति आकर्षित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। ३ असोजबाट शुरू हुने 'नाडा अटो शो' मा सबै ब्रान्डले छरिता मोडेलकै बिक्री बढाउने ध्येय राखेका छन्। यसका लागि कसैले नयाँ स्किम ल्याउँदैछन् भने कोही नयाँ गाडीको पहिलो प्रदर्शनीको तयारीमा छन्।
इण्डिका, टाटा, अल्टो, मारुती सुजुकी, फाविया, स्कोडा
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नेपालमा बढेको रियल स्टेट कारोबार र ब्याङ्किङ क्षेत्रको सस्तो व्याजका कारण कार, जीप तथा भ्यानको आयातमा करीब शतप्रतिशत वृद्धि भएको थियो। त्यसपछि घरजग्गा कारोबारका साथै समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा निजी सवारी साधनको आयातमा समेत ओरालो लाग्यो। आव २०६५/६६ मा ६८०० वटा निजी गाडी आयात भएकोमा २०६६/६७ मा तिनको संख्या १२ हजार ३०० पुगेको थियो। तर २०६७/६८ र २०६८/६९ मा यो क्रमशः ८५०० र ५४०० मा झ्र्‍यो। तिनमा पनि महङ्गा गाडीको आयात ह्वात्तै घटेको छ। “शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले मानिसहरू ठूलो र महँगो गाडी चढेर जोखिममा पार्न नचाहेका हुन्”, किया मोटर्सको नेपालस्थित अधिकृत बिक्रेता कन्टिनेन्टल एसोसिएसन प्रालिका महाप्रबन्धक सचिन अर्याल भन्छन्।
आर्थिक वर्ष २०४६/४७ यता नेपाल भित्रिएका १२ लाख ८० हजार ६९० सवारी साधनमध्ये सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकलको संख्या ९ लाख ७४ हजार छ भने कार, जीप र भ्यानको १ लाख २७ हजार ३०० छ।
नेपालको सडकको दुरवस्थाप्रति सबभन्दा बढी चिन्ता गर्नेमा निजी गाडी किन्नेहरू पर्छन्। राज्यलाई धेरै कर बुझ्ाए पनि कहिल्यै सहजै सडकमा हिंड्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। सडक विभागले हालसम्म देशभर पक्की र कच्ची गरी २३ हजार ५०० किलोमिटर सडक बनाएको छ। त्यसलाई नियमित मर्मतसम्भार गर्न वर्षमा रु.९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने इन्जिनियरहरू बताउँछन्। सरकारले भने त्यसको एकतिहाई मात्र विनियोजन गरिरहेको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला सडक नपुगेको ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्ने भएकोले मर्मतमा सीमित विनियोजन गर्नुपरेको बताउँछन्।
सडकको नियमित मर्मतसम्भार नगरी बिग्रिन थालेको दुई–तीन वर्षपछि पुनर्निर्माण गर्दा धेरै महङ्गो पर्ने सडक विभागका एक इन्जिनियर बताउँछन्। करीब १५०० किलोमिटर सडक रहेको काठमाडौं उपत्यकामा अत्यधिक सवारी चापका कारण धेरै सडक खाल्डाखुल्डी परेका र बिग्रे–भत्केका छन्। शहरभित्रको मुख्य सडकमा सवारी जाम कम गर्न खोलिएका विभिन्न नदी करिडोरका सडक समयमै निर्माण नभएकाले वर्षायाममा हिलाम्मे हुन्छन्। मर्मत पनि जेठ–असारको समयमा गरिंदा केही दिनमै कालोपत्र भत्किने गरेको छ।
एउटा सवारी साधन आयातमा सरकारले भन्सार, अन्तशुल्क आदि गरी २४० प्रतिशत कर लिन्छ। गत आवमा मोटरबाट सरकारले रु.३० अर्ब राजस्व उठायो। मोटर आयातमा पाँच प्रतिशत त सडक सुधार तथा मर्मतकै नाममा उठाइने गरेको छ। गाडी नवीकरण गर्दा वार्षिक रु.३ अर्ब उठ्छ। यस्तै पेट्रोल र डिजल आयातमा मासिक रु.१ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ। सवारी क्षेत्रबाट यति विघ्न कर उठाइए पनि यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सरकारी चासो नभएको व्यवसायीको गुनासो छ।
नाडा अध्यक्ष सौरभ ज्योति दुर्गममा सडक पुर्‍याउने सरकारको प्राथमिकतामा पनि समर्थन गर्दै व्यवसायीहरूले भएका सडकलाई पनि बिग्रिनुअघि नै मर्मत गर्न माग गरेको बताउँछन्। आव २०६६/६७ मा रु.४४ अर्ब पुगेको यातायात क्षेत्रको राजस्व सडकको अवस्थाकै कारण पनि रु.३० अर्बको हाराहारीमा झ्रिसकेको उनको भनाइ छ। “गाडी चढ्ने जनसंख्या बढ्नु भनेको समृद्धिको सूचक हो”, ज्योति भन्छन्, “सरकारले त यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पो लिनुपर्छ।”
एभेन्जा, टोयोटा, माइक्रा, निसान, सिरिअन, डाइहात्सु
इअन, हुन्डाई, फिगो, फोर्ड
नेपालमा कर नीतिको अव्यावहारिकताका कारण कम तेल खपत गर्ने हाइब्रिड गाडीको आयातमा समस्या परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। उच्च प्रविधिका त्यस्ता गाडीको उत्पादन लागत धेरै पर्ने तर सरकारको कर नीति समान रहेकाले चाहेर पनि ल्याउन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा भने सरकारले हुने वर्गबाट लिएको कर नहुने वर्गको कल्याणमा खर्च गर्ने समन्यायिक नीति अवलम्बन गरेको बताउँछन्। “गत आवमा सडक क्षेत्रको समग्र बजेट रु.३४ अर्ब रहेकाले सडक निर्माण र मर्मतमा सरकारले चासो नदिएको भन्न मिल्दैन”, सचिव बास्कोटा भन्छन्। तर, सरकारले बजेट बढाएकै भए पनि सवारी चाप भएका सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिएका छैनन्, देशभर जम्माजम्मी १५ किलोमिटर मात्र नयाँ कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ।
गाडी उत्पादन र उपयोगमा नेपालका दुवै छिमेकी देशको प्रगति लोभलाग्दो छ। चीन कार उत्पादन र खपत दुवैमा विश्वमै पहिलो नम्बरमा छ भने भारत उत्पादनमा छैटौं तथा खपतमा चौथो। सन् २०११ मा चीनले १ करोड ४४ लाख ८५ हजार कार उत्पादन गर्‍यो भने भारतले ३० लाख ५३ हजार ८००। अटोमोबाइल क्षेत्रमा विश्वमा विकसित नवीन प्रविधिको प्रयोग छरिता गाडीहरूमा पनि भइरहेकाले दुवै देश बढ्दो ट्राफिक चापबाट जोगिन साना कारतर्फ आकर्षित छन्। राम्रो सडकमा गुड्न पाए नेपाली उपभोक्तामा पनि त्यस्ता कारप्रति आकर्षण बढ्नेछ।
सडक सुरक्षामा केन्द्रित प्रदर्शनी
सौरभ ज्योति, अध्यक्ष, नाडा
कारको बिक्री घटिरहेका बेला 'नाडा अटो शो' गर्नुको उद्देश्य के हो?
सवारी साधनको बिक्रीलाई देशको अर्थतन्त्र, कर नीति, सडकको अवस्था, शान्ति सुरक्षा आदिले प्रभाव पार्दछ। ग्राहकलाई छनोटको अवसर दिन दुई–दुई वर्षमा हुँदै आएको 'नाडा अटो शो' यस वर्षदेखि वर्षेनि आयोजना गर्दैछौं। साथै, बढ्दो सडक दुर्घटना कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर 'सेफ्टी सेमिनार' पनि गर्दैछौं।
प्रदर्शनीमा कस्ता कार हुनेछन्?
धेरै कम्पनीका नयाँ मोडेल र डिजाइनका उत्पादन प्रदर्शनीमा राखिनेछ। २२ वटा ब्रान्डसहित ४० कम्पनीका १०० स्टल हुनेछन्। साथै, नेपालमा उत्पादित सवारी साधन र त्यससँग सम्बन्धित वस्तुहरू राखिने 'मेड इन नेपाल' पेभेलियन पनि हुनेछ। क्लासिक गाडी र मोटरसाइकलको छुट्टै पेभेलियन बनाइनेछ। ज्योति समूहबाट हामी सामान्य कारको तुलनामा ५० प्रतिशत कम इन्धन खपत गर्ने होण्डा को हाइब्रिड कार इन्साइट तथा नयाँ स्वरुपमा होण्डा कार विप्रो र सिटी तथा मोटरसाइकलमा नयाँ साइन र डियो स्कुटर सार्वजनिक गर्दैछौं।
इन्साइटको विशेषता चाहिं?
विशेष प्रविधिबाट होण्डा ले जापानमा निर्माण गरेको कम इन्धनमा धेरै किलोमिटर गुड्ने कार हो। यसको आयात बढाउन सके नेपाल जस्ता मुलुकलाई राहत मिल्ने थियो। तर बढी उत्पादन लागत र उच्च कर नीतिका कारण नेपालमा यसको मूल्य महँगो पर्नेछ।
भ्यालु एडिसनमा जोड
देभस्वरुप महर्जन, निर्देशक, बतास ब्रदर्स मोटर्स इटालियन ब्रान्ड फिएटका लिनिया र पुन्टो गाडी बिक्री गर्दै आएका छौं। फिएटका गाडी नेपालमा २०० भन्दा बढी बिक्री भइसकेका छन्। हाम्रो पहिलो दायित्व ग्राहकको 'भ्यालु एडिसन' हो, छूटको भ्रमपूर्ण प्रचार होइन। काठमाडौंसहित पोखरा, बुटवल र विराटनगरमा फिएटका सर्भिस सेन्टर छन् भने नारायणगढ र नेपालगञ्जमा निर्माण हुँदैछन्। गुणस्तरका कारण फिएट केही महङ्गो भए पनि स्पेयर पार्टस् तुलनात्मक रूपमा सस्ता छन्।
सानो कार ल्याउँदैछौं
शम्भु सुवेदी, सिनियर म्यानेजर, दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स हामीले बिक्री गर्ने निसान कार, जीप तथा पिकअप भ्यान विश्वमै उत्कृष्ट निजी सवारी साधनमा पर्छन्। जापानमा निर्मित मोटर मात्र ल्याइरहेकोमा नेपाली बजारको माग अनुसार अटो शोको अवसरमा भारतमा निर्मित सानो आकारको माइक्रा कार पनि ल्याउँदैछौं, जसको तीन फरक मोडलका कारको मूल्य रु.२२ लाखदेखि रु.२६ लाख पर्नेछ। यसैगरी नयाँ मोडलको निसान सन्नी वीरगञ्ज भन्सारमा आइपुगेको छ भने टिडा कार बजारमा छ।
बजार हिस्सा कायम छ
सुनिलबहादुर क्षेत्री, नायव महाप्रबन्धक, सिजी अटोमोबाइल्स झ्न्डै तीन दशकदेखि ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा दिएकोले बढ्दो प्रतिस्पर्धामा पनि बजार हिस्सा कायमै छ। देशभरका २० बिक्री केन्द्र तथा १४ सर्भिस सेन्टरबाट मासिक २०० गाडी बिक्री भइरहेको छ। मारुती ८०० देखि ग्रान्ड भिटेरासम्म १४ फरक इन्जिन क्षमता र मोडेलका गाडी छन्। ग्राहकलाई चाहिएको सेवा कम्पनीले स्थानीय तहबाटै दिएको छ।
समस्या विनिमय दरको
सचिन अर्याल, महाप्रबन्धक, कन्टिनेन्टल एसोसिएट्स प्रालि कोरियामा निर्मित किया का कार तथा जीप बिक्री गर्छौं। कारमा पिकान्टो, रियो र सेराटो तथा जीपमा सोल, स्पोर्टेज र सोरेन्टो छन्। सबैभन्दा कम मूल्यको पिकान्टोको रु.२१ लाख ५० हजार तथा बढी सोरेन्टोको रु.८१ लाख ८५ हजार पर्छ। विनिमय दरको तीव्र उतारचढावका कारण तेस्रो मुलुकबाट गाडी आयात गर्न अहिले धेरै समस्या छ।
ग्राहकको विश्वास आर्जन गर्दैछौं
दीपक अग्रवाल, महाप्रबन्धक, एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज हामी चार वर्षदेखि युरोपेली ब्रान्ड स्कोडा बिक्री गर्दै आएका छौं। विभिन्न पाँच मोडेलको रु.२३ लाख पर्ने फावियादेखि रु.७५ लाखको सुपर्वसम्म बजारमा छन्। नाडा अटो शोलाई लक्षित गरेर नयाँ डिजाइनको र्‍यापिड कार ल्याउँदैछौं। हालसम्ममा ५०० भन्दा धेरै कार बिक्री भइसकेका छन्। यसको मुख्य कारण स्कोडा को अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान तथा एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजको स्वदेशभित्रको ख्याति हो।
फिगोको लोकप्रियता उच्च
दिपेश शाक्य, सेल्स म्यानेजर, जिओ अटोमोबाइल्स दुई वर्षमा १००० भन्दा बढी फिगो कार बिक्री भइसकेका छन्। फोर्ड का पाँच मोडेल नेपाली बजारमा छन्। तिनमा न्यूनतम मूल्य रु.१८ लाख ४९ हजारको फिगो पेट्रोल एलएक्सआईदेखि अधिकतम रु.७५ लाखको एभरेष्टसम्म छन्।
दुई–तीन महीनाअघिसम्म औसत ४०–५० कार बिक्री हुँदै आएकोमा गत महीना ७८ वटा बिक्री भएका छन्। राजधानी बाहिर विराटनगर, नारायणगढ, बुटवल, पोखरामा फोर्ड को बिक्री राम्रो छ। नाडा अटो शो लक्षित केही नयाँ मोडेल तथा नयाँ डिजाइनको रेञ्जर राख्ने हाम्रो सोच छ।